Rita, Writing for My Sake!: June 2011
ကိုယ် နှင့် ဂျူးများ (၂)
ကိုယ် နှင့် ဂျူးများ
* ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ
သစ်ပင်တွေနေရာမှာ တခြားတခုခု အစားထိုးပြီး ရေးလို့မရဘူးလား၊ ဥပမာ - ပန်းချီကားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ လို့ တစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ ပြုပြင် ပျိုးထောင် လိုက်လျောလို့ရတာ၊ ပြုပြင် ပျိုးထောင် လိုက်လျောမှုကို လိုအပ်တာ သက်ရှိတွေပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ပန်းချီကားတစ်ချပ်က ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာစိတ်၊ အတတ်ပညာစိတ်နဲ့ ပြုပြင်ဖန်တီးတာ ခံရနိုင်ပေမယ့်၊ ပန်းချီကားဆိုတာ လိုအင်တို့ လိုအပ်ချက်တို့စတဲ့ ဆန္ဒတွေမရှိတဲ့ ဖန်တီးခံသက်သက် သက်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသာပဲ။
သက်ရှိတွေရဲ့ကြားမှာ ဆက်စပ်ချည်နှောင်ပေးတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားကို ပြဆိုဖို့ရာ (လူ၊ သတ္တဝါကို မသုံးဘူးဆိုရင်တော့) သစ်ပင်ထက်ကောင်းတဲ့ သင်္ကေတ ရှိမယ် မထင်တော့ဘူး။
"တချို့အပင်က တဝက်တပျက် အရိပ်ကို ကြိုက်တယ်။ တချို့အပင်က တောက်ပတဲ့ နေရောင်ကို ကြိုက်တယ်။ အပင်တွေရဲ့ လိုအပ်မှုအလိုက် ကိုယ်က နေရာချထားပေးတယ်။ မင်းက နည်းနည်းလေးမှ နားမလည်ဘဲ နေရာရွှေ့တယ်။ ဥယျာဉ်ပညာဟာ မျက်စေ့ပသာဒတစ်ခုတည်း အပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး။"
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် 40 ပတ်ဝန်းကျင် အညာမြို့လေးတမြို့က သူသင်ချင်တဲ့ပညာ သင်ပြီး အိမ်က လုပ်ငန်းကိုဦးစီးချင်တဲ့ လေးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို မိဘဆွေမျိုးတွေ၊ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေ၊ ဆရာသမားတွေက အတင်းအကြပ်ဝိုင်းပြီး သူတို့တက်စေချင်တဲ့ ကျောင်းကို ပို့လိုက်ကြတယ် ဆိုတာ ခုတော့ ပုံပြင်လိုပဲ။
စေတနာဆိုတာ အမျှော်အမြင်မပါရင်၊ အဲဒီ စေတနာကို ခံယူရမယ့် တဘက်သားရဲ့အခြေအနေကို နားလည်သိမြင်တတ်မှုမပါရင် အတော် အငြင်းပွားစရာကောင်းတယ်။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝရှိတယ်။ အဲဒါကို စေတနာတချို့က ဖန်တီးနိုင်တယ်။ စေတနာတချို့က ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်။
"ကိုယ်နဲ့အတူ လိုက်နေသမျှ နှစ်နှစ်တာကာလမှာ ကိုယ် ဘယ်လို ကြိုးစားဆွဲခေါ်ခေါ် မင်းအတွက် နေသားတကျမဖြစ်ဘူး။ မင်းရဲ့ အသုံးဝင်မှုဟာ ဘာလဲဆိုတာ မင်းကိုယ်မင်း မသိဘူး။ မင်းကိုယ်မင်း အားမရဘူး။ မင်းဘဝကို မကျေနပ်ဘူး။ ကိုယ့် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မင်းမပျော်ဘူး။ မင်းရဲ့ ညှိုးနွမ်းမှုကို ကိုယ် ကြာရှည်မြင်ရက်ပါ့မလား။ မင်းနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး နေရာကို ကိုယ်သိအောင် ကြိုးစားပြီး ကိုယ် ဒီမှာနေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတော့တာပေါ့"
မနေ့က ဒီဝတ္ထုတိုအကြောင်း ရေးလို့ကုန်ပြီလို့ ထင်လိုက်မိတယ်။
Posted by Rita at 6/28/2011 01:03:00 PM2comments Links to this post
Labels: Juu, Thought
ထူးအိမ်သင်အကြောင်း ရေးတုန်းက ငယ်ငယ်တုန်းကလို့ အစချီပြောမှ ရတယ်။
ဂျူးအကြောင်းကျတော့ အဲလိုမဟုတ်ပြန်ဘူး၊ ပြောင်းပြန်။
ဂျူးကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စဖတ်မိတာပေမယ့် (အထူးသဖြင့် ဝတ္ထုတိုတွေကို) အဲဒီအချိန်မှာ နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါတွေကို နားမလည်သေးဘူးဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ နားလည်နေတယ်။
စဖတ်မိတာ "ချစ်ခဲ့ဖူးသော" ဝတ္ထုတို ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဖတ်ပြီး၊ ဘာကိုရေးတာလဲ၊ ဒါတွေကိုရေးတဲ့ ဂျူး က ဘာလို့ ဒီလောက်တောင်မှ နာမည်ကြီးရတာလဲလို့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ချစ်သူကောင်မလေးကို မနမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ (လျှော်လဲ လျှော်မပစ်နိုင်တဲ့) ရစရာအကြွေး ကျန်နေသေးသလို ခံစားမှုမျိုးကို မြင်ရလောက်အောင် အားမကောင်းခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်က ကာတွန်းပဲ အများဆုံးဖတ်နေတာကိုး။
* ပေဖူးလွှာ အင်တာဗျူး
နောက်တော့ ဒီမှာပဲ တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးဝင်းငြိမ်းနဲ့ ပေဖူးလွှာအင်တာဗျူး (တပိုင်းတစ)။
သူ ပြောတတ် ဆိုတတ်၊ မေးတတ် ဖြေတတ်တာ (ဦးဝင်းငြိမ်း မေးတတ်သည် ဟု သိပ်မထင်ပါ။ ဂျူး ကိုယ်တိုင်ကသာ အမေးများနှင့် ပြန်ဖြေတတ်သည် ဟု ထင်မိသည်) စေ့စပ်ခိုင်မာတာကို အတော်သဘောကျခဲ့ဖူးတယ်။ အဖြေစကားလုံးတွေ အင်မတန် သိပ်သည်းတာပဲ ထင်ခဲ့တယ်။ (ဦးစံရှား ဖတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ အကျိုးနဲ့ အကြောင်းပြပြီး ပြောတာတွေကို အတော်ပဲ သဘောကျခဲ့မိတယ်)
မှတ်မှတ်ရရ ကျောင်းမှာ အခင်ဆုံး အတွဲဖြစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းက အဲဒီစာအုပ် ငှားသွားတော့ သူ့မိဘတွေ (ကျောင်းက ဆရာနဲ့ ဆရာမ) ပါ ဖတ်ပြီး သိပ်သဘောကျခဲ့ကြတာ မှတ်မိတယ်။
အဲဒီ တပိုင်းတစ အင်တာဗျူးရဲ့ အစမှာ "ကျွန်မပြောချင်တဲ့ ဝမ်းနည်းစကားက ဒီလို ဇာတ်ကောင်စရိုက်မျိုး ဖန်တီးခဲ့မိတဲ့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဝေဖန်ခံရတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းစကား ပြောတာပါ။ ကိုယ့်အပေါ်မှာ လူတစ်ယောက် နားမလည်နိုင်တာကို ခံစားရတဲ့အခါ ၀မ်းနည်းရသလောက်ပါပဲ" တဲ့။
သူ့ခေတ် သူ့အခါ သူ့အခြေအနေကို နားလည်လေ အဲဒီစကားလုံးကို ပြောဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သူ့စိတ်ခံစားမှုကို သဘောပေါက်လာလေပဲ။
၄/၅ တန်းမှာ "တက်ဆူးကိုး ကူရိုယာနာဂီ" ရဲ့ "ပြတင်းပေါက်က မိန်းကလေးငယ်" (မြသိန်း ဘာသာပြန်) စာအုပ်ကို မကြာခဏ ဖတ်ခဲ့မိပေမယ့် ၇ တန်းတက်မယ့်နှစ် '93 လောက်မှာ အဲဒီ "ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ" ကို ဖတ်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ နားမလည်ခဲ့ပြန်ဘူး။ ဘာပြောထားမှန်းတောင် မသိခဲ့တဲ့ ဝတ္ထု။
(စကားမစပ် 2000 ခုနှစ်လောက်မှာ အက်ဆေးလိုလို ဘာလိုလို ဘာမှန်းမသိတဲ့ စာတပုဒ်ရေးဖြစ်တာဟာ အဲဒီ ဝတ္ထုတိုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတာ ခု အတော်နောင်တရမိတယ်။ တကယ်တော့ အဆုံးနားလေးမှာ ကပ်ထည့်လိုက်တဲ့ စာ တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကလွဲလို့ ကျန်တာတွေက ကိုယ့်ဘာသာ ရေးချင်ရာ ချရေးထားမိတာတွေချည်းပဲ။ အဲဒီဝတ္ထုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပါလို့ ရေးထားတာ အဲဒီဝတ္ထုကို mislead လုပ်ရာတောင် ကျနေသေးတော့တယ်)
ဂျူးရဲ့ မှတ်ချက်က "ကျွန်မတို့က အချစ်ဆိုတာကို စိတ်ခံစားမှုသက်သက်လို့ ထင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချစ်ဆိုတာ သင်ကြားတတ်မြောက်ရမယ့် အတတ်ပညာ တစ်ခုပါ" တဲ့။ အချစ်အကြောင်းလို့ သိသာစေတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး၊ တပုဒ်လုံး သစ်ပင်တွေအကြောင်းနဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့ အပြန်အလှန် စကားပြောခန်းတွေချည်းပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖတ်မိသမျှ ဂျူးရဲ့ ဝတ္ထုတိုတွေ ဘာကိုပြောချင်တယ် ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖတ်ထားတာတွေကို ခေါင်းထဲမှာ မှတ်မိနေခဲ့တယ်။
နောက် ၂ နှစ်လောက်ကြာပြီး ပြင်ပအကြောင်းအရာတစ်ခုကနေ အဲဒီဝတ္ထုရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ရလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ "တက်ဆူးကိုး ကူရိုယာနာဂီ" ရဲ့ ငယ်ဘဝ "ပြတင်းပေါက်က မိန်းကလေးငယ်" ထဲက အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက်တွေကိုပါ တန်းစီပြီး မြင်ယောင်လာမိတယ်။
အဲဒီခေတ်အခါက လက်ရှိဂျပန်ပညာရေးစံနစ်ကနေ သွေဖည်သယောင် တမူကွဲတဲ့ စံနစ်ကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့ တိုမိုကျောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး "ဆိုဆာကူး ကိုဘာယာရှီ"။
"He believed all children were born with an innate good nature, which can be easily damaged by their environment and the wrong adult influences. His aim was to uncover their 'good nature' and develop it, so that the children would grow into people with individuality."
မူလတန်းစတက်တဲ့နှစ်မှာပဲ ပုံမှန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေ ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကို သမီးကလေး စိတ်ဒဏ်ရာရမှာစိုးလို့ ဖွင့်မပြောပြခဲ့ဘဲ ကလေးနဲ့ သင့်တော်မယ့် ကျောင်းကိုရှာအပ်ခဲ့တဲ့၊ သမီးကလေး နားလည်လက်ခံနိုင်မယ့် အသက် ၂၀ ကျမှ အရင်ကျောင်းက အထုတ်ခံခဲ့ရလို့ သမီးကို မေမေက တိုမိုကျောင်းကို ပို့ခဲ့ရတာပေါ့ လို့ ဖွင့်ပြောခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်ကလေးမလေး တော့တိုး-ချန် ရဲ့ အမေ။
"ကျွန်မကို အရင်ကျောင်းကနေ အထုတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ (တိုမိုကျောင်းမှာ အဆင်ပြေပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ခဲ့တဲ့) ကျွန်မဟာ တကယ်ပဲ အရင်ကျောင်းမှာနေတုန်းက အဲသလောက် ဆိုးဝါးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သလား"
"... အဲဒီအကြောင်းအရာကို ကျွန်မ အသက် ၂၀ မတိုင်ခင်မှာ ဖွင့်မပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ အမေကို အနူးအညွတ် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။"
"မင်းကို ကျောင်းက ထုတ်လိုက်ပြီတဲ့။ ဘာတွေဖြစ်လာဦးမလဲ။ ခုနောက်တကျောင်းကပါ ဆက်ပြီး အထုတ်ခံရမယ်ဆိုရင် မင်း ဘယ်ကျောင်းကို သွားတက်မလဲ" ဆိုတာမျိုးတွေ အမေက ကျွန်မကို အဲဒီအချိန်ကတည်းက ပြောမယ်ဆို ပြောနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုသာ ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင် တိုမိုဂါဂူးအန် ခေါ်တဲ့ ကျောင်းသစ်ရဲ့ ဂိတ်ဝကို ပထမဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မ ဘယ်လောက်များ စိတ်ပျက်အားငယ်နေခဲ့ရမှာပါလိမ့်။ အမြစ်တွေထွက်နေတဲ့ (post) ကျောင်းဂိတ်တံခါးဝကြီးနဲ့ မီးရထားတွဲစာသင်ခန်းတွေကလည်း ကျွန်မကို အဲဒီအချိန်မှာ ဝမ်းမြောက်ပျော်မြူးစေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုအမေမျိုးရှိတာ ကျွန်မ ဘယ်လောက်များ ကံကောင်းလိုက်ပါသလဲ။"
"တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ခံစားမှု စိတ်သက်သက် မဟုတ်ဘူး။
အကဲခတ်တတ်မှု ပါတယ်။ နားလည်မှု ပါတယ်။ ပြုစုပျိုးထောင်မှု ပါတယ်။"
"ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ" အကြောင်းကို ရေးပြဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ခုထိ ထင်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ဒီဝတ္ထုကို ဘယ်လို နားလည်တယ်၊ ဘယ်လို မြင်ခဲ့တယ်၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း စိမ့်ဝင်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ပြောဖို့ အဲဒီဝတ္ထုသက်သက်နဲ့တင် မလုံလောက်ဘူး။
အဲဒီဝတ္ထုကို မြင်လိုက်နိုင်ဖို့ တော့တိုး-ချန် က အထောက်အပံ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီဝတ္ထုကြောင့်ပဲ အစက ဘာရယ်ညာရယ် မစောကြောမိတဲ့ သာမန်သာ နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ တော့တိုး-ချန်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ပိုပြီး ပီပီပြင်ပြင် မြင်လိုက်နိုင်တယ်။
ကိုယ့်အတွက်တော့ အဲဒီဝတ္ထုနှစ်ခုက မိဘနဲ့ သားသမီး၊ ဆရာနဲ့တပည့်၊ ချစ်သူရည်းစား စသဖြင့် ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူ့ကြားမှာမဆိုရှိတဲ့ ချစ်(တတ်)ခြင်းတွေကို ဖွင့်ဆိုပြတဲ့ ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပါပဲ။
လူ ဆိုတာဟာ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဘဝတွေ ထွေပြား၊ ခံစားမှုတွေ ထွေပြား၊ ဉာဏ်ရည်နဲ့ ခံယူချက်တွေ ထွေပြား၊ အဲဒါတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ထွေပြားတယ်။
အဲဒီလို ထွေပြားတဲ့လူတွေဟာ "မိဘ" ဖြစ်စေ၊ "ဆရာ" ဖြစ်စေ၊ "ချစ်သူ" ဖြစ်စေ ခေါင်းစဉ်ကွဲတွေ အမျိုးမျိုးအောက် ရောက်တဲ့အခါမှာ မိဘလို့ဆိုတာနဲ့ သားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့ စိတ်စေတနာတွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ တူသွားကြရော၊ ဆရာလို့ဆိုတာနဲ့ တပည့်အပေါ်မှာထားတဲ့ စိတ်စေတနာတွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ တူသွားကြရောဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လူဟာ လူပါပဲ။ လူ လူချင်းမှာ မတူနိုင်ရင် ခေါင်းစဉ်တူတစ်ခုခုအောက် ရောက်သွားတာနဲ့လည်း မတူနိုင်ဘူး။
စိတ်စေတနာဆိုတဲ့ မမြင်ရတဲ့၊ လက်ဆုတ်လက်ကိုင် သက်သေပြစရာမရှိတဲ့၊ အငြင်းပွားလွယ်တဲ့အချက်ကို ချန်ထားခဲ့ရင်တော့ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ (အချစ်ဆိုတာ ဒီတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ခံစားမှုသက်သက်တင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်)။ အဲဒီအချစ်စိတ်ရဲ့နောက်မှာ အရှည်ကိုမျှော်တွေးတဲ့ အကျိုးကို လိုလားစိတ်နဲ့ တတ်သိနားလည်တဲ့၊ ဉာဏ်ပညာနဲ့ယှဉ်တဲ့ ပံ့ပိုးပျိုးထောင်နိုင်မှုပါရတယ်။
"... ကိုယ် ဒီသစ်ပင်တွေကို အမျိုးအစား အများကြီး စိုက်လာခဲ့တာနဲ့အမျှ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိုအပ်မှု၊ ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေအားလုံးကို ကိုယ်သိတယ်။ သူတို့အတွက် ကိုယ် ဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိလာတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒဆိုတာ ကိုယ်မေ့ထားနိုင်ပြီး၊ သစ်ပင်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အမြဲစောင့်ကြည့် ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့လူ ဖြစ်လာတယ်။
ဘယ်သစ်ပင်က ဘယ်ရာသီမှာ ဘယ်လိုအနေအထား ပြောင်းတတ်တယ်။ ဘယ်သစ်ပင်က လေဒဏ်ကို ကြောက်တယ်။ ဘယ်သစ်ပင်အမြစ်က မိုးပေါက်ဒဏ်ကို ကြောက်တယ်... ဒါတွေကို ကိုယ်နားလည်လာတယ်။ သူတို့ လိုအပ်မယ့် နှစ်သက်မယ့် အနေအထားကို အကဲခတ်ပြီး ပြုပြင်လိုက်လျောပေးတယ်။"
(ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ - ဂျူး)
မစ္စတာကိုဘာယာရှီရဲ့ တိုမိုဂါဂူးအန်ကျောင်းဟာ သူ့ရဲ့ သစ်ပင်ဥယျာဉ်လိုပါပဲ။
"သစ်ပင်တွေရဲ့ အရိပ်အကဲကို သိတဲ့ကိုယ်ဟာ မင်းအရိပ်အကဲကို ဘာကြောင့် မသိရမှာလဲ၊ မင်းဘာလိုချင်တယ် ဘာဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ် အားလုံးသိတယ်။ အချစ်ဆိုတာ မင်းထင်သလို ခံစားမှုသက်သက် မဟုတ်ဘူး။ အတတ်ပညာတစ်ခုပဲ"
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းရဲ့ "အမေနဲ့ ကျွန်တော်" ကို ဖတ်ရတော့လည်း ခေတ်ပညာ အကုန်အစင်မသင်ခဲ့ရပေမယ့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ပင်စင်ယူတဲ့အချိန် သားသမီးတွေအတွက် စီးပွားရေး၊ ပညာရေးသာမက စားရေးသောက်ရေးမကျန် ထောင့်စေ့အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့၊ အညာမြို့လေးတစ်မြို့က အမေရဲ့ အနုပညာကို မြင်ယောင်ခဲ့မိတယ်။
ရန်ကုန်မှာနေချင်လို့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတက်မယ် ပြောတဲ့သားကို "ငါတို့ထဲမှာ လေယာဉ်မှူးတစ်ယောက်၊ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ရှိရင် တော်ပြီ။ မင်း ဆေးကျောင်းပဲတက်" လို့ ပြောတဲ့အချက်က ခုချိန်မှာ နည်းလမ်းကျလှတယ် မဆိုသာရင်တောင်မှ သားသမီးတွေ ငယ်ငယ်တည်းကနေ ဘွဲ့ရပြီးတဲ့ထိ အရာရာထောင့်စေ့အောင် စွမ်းဆောင်ကျိုးပမ်းခဲ့တာတွေဟာ အံ့မခန်းပါပဲ။ အဲဒီအားမာန်တွေနဲ့ အားထုတ်မှုတွေဟာ ချစ်ခြင်း အတတ်ပညာနဲ့ အနုပညာပါပဲလို့ မြင်မိတယ်။
ထူးအိမ်သင် ဆုံးပြီးနောက်မှာ ထုတ်တဲ့ "အစိမ်းရင့်ရောင် ရက်စွဲများ" မှာ သီဟန်သွင်နဲ့ နီကိုရဲ ရေးသွားကြတဲ့ "သမီးကလေးကို သိုင်းသင်ပေးချင်တယ်" ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ပါတယ်။ ဆိုခဲ့တဲ့ နှစ်ယောက်စလုံး သူ အဲဒီအကြောင်းအရာကို ပြောတုန်းက ရယ်စရာလို သဘောထားခဲ့မိကြတယ်ဆိုပေမယ့် ဆောင်းပါးတွေအဖြစ် ပြန်ရေးတော့ သူတို့ ဒီကိစ္စကို အလေးအနက် ရေးခဲ့ကြတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
"ကျွန်တော့်သမီးကိုယ်တိုင် သဘောတူကြည်ဖြူလို့ကတော့ သူ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် စိတ်မပူပါဘူး။ သူ့စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲ အနိုင်အထက်ပြုခံရလို့ စိတ်ဒဏ်ရာရသွားမှာသာ စိုးတာပါ"
ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ အချစ်ဟာ အတ္တကို အခြေခံမှာချည်းပဲ။
ချစ်တာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးရသူရဲ့ သူ့သဘာဝနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို လိုလားဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့သာ ခက်တာပါ။
ကိုယ့်အတွက်တော့ ဂျူးရဲ့ ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ က အဓိပ္ပါယ်အပြည့်ဝဆုံးနဲ့ အနှစ်သက်မိဆုံး ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ အဲဒီဝတ္ထုအကြောင်းကို ဘယ်သောအခါမှလည်း ပြည့်စုံအောင် ပြန်ပြောပြနိုင်မယ် မထင်ဘူး။
ချစ်ခြင်း၏အနုပညာက နားလည်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ ချစ်ခြင်း၏အနုပညာကို နားလည်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ ဆက်စပ်ပတ်သတ် သိကျွမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေမိသားစုတချို့ကို ကျေးဇူးတင်နေမိတော့တယ်။
ဒီအကြောင်းအရာတွေက တချို့အတွက် ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို ထင်တဲ့သူတွေအတွက် တကယ်ပဲ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by Rita at 6/27/2011 11:42:00 AM3comments Links to this post
Babe I miss you, you know
'Cause I’m just too far from where you are
သီချင်းတစ်ပုဒ်ဟာ ကိုယ့်ကို တမင်ညွှန်းဆိုတယ် ထင်ရလောက်တဲ့ အဖြစ်တွေရှိကြမှာပဲ။ အဲဒီအခါ အဲသည်သီချင်းကို ထပ်ခါနားထောင်ရင်း ချိုမြိန် စူးရှ ကြည်နူး ကြေကွဲ ခံစားချက်တွေ တခုချင်းစီခံစားရနိုင်သလို အားလုံးကို တပြိုင်တည်း ပေါင်းဆုံပြီး ခံစားရတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပဲ။
ဒီနေ့ ရုံးမှာ ဒီသီချင်းကို တိုးတိုး ဖွင့်ထားရင်း ဆဋ္ဌမမြောက်အပိုဒ်ကလေးကိုလည်း သိပ်ကြိုက်နေမိတယ်။
ပြန်ဆိုထားတဲ့ မူကွဲတွေ အများကြီးရှိတယ် ထင်ပါတယ်။
ဝေးကွာချိန်က ရှည်လျားလွန်းတဲ့အခါ ကြားကာလတွေကို အလိုလျောက် ဥပေက္ခာနဲ့ မသိလိုက်မသိဘာသာ ဖြတ်သန်းနေမိတော့... တစ်နှစ်တာပတ်လုံးမှာ လွမ်းစရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတာ ပြန်တွေ့ရခါနီးအချိန် ဖြစ်သွားတော့တယ်။
မကြာခင် တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာ သေချာလေ ပိုလို့ လွမ်းရလေ။
အင်း MD ကြားရင်တော့ သူ့စောင်းဖွင့်တယ် ထင်မလားပဲ။
Posted by Rita at 6/13/2011 10:49:00 AM3comments Links to this post
Labels: Song, သီချင်း
အဲသည် ကျောင်းဝန်းထဲမှာ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှု ညံ့ဖျင်းလွန်းသော ကိုယ်သည် အဲဒါဘာပင်ဟု အဲဒီတုန်းကတည်းက သတိမထားမိခဲ့ပါ။ ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖြတ်သန်းခိုနားခဲ့ဖူးသော အရိပ်တစ်ခု၏ အရင်းအမြစ်ကို အမှတ်တမဲ့ဖြစ်ခြင်းသည် ဆိုးရွားလှသည်ဟု သတ်မှတ်မည်ဆိုပါက ကိုယ်သည် အလွန်ပင် ဆိုးရွားလှသူ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသစ်ပင်ကြီးအောက်မှာ တစ်ယောက်ယောက် (သို့) တစ်စုတစ်ဖွဲ့၏ အလာကို စောင့်စားရင်း လူတစ်ယောက်နှင့်ကိုယ် အတန်ကြာအောင် အတူတူရပ်လျက် စကားပြောခဲ့ကြဖူးသည်။ နှစ်ယောက်တည်း ရှိနေသဖြင့် ဝန်လေးကျဉ်းကြပ်ခြင်းမျိုး သူရော ကိုယ့်မှာပါ မဖြစ်ခဲ့။ တစ်ယောက်ယောက် (သို့) တစ်စုတစ်ဖွဲ့၏ အလာကို ထိုသစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင် ရပ်တန့် စောင့်စားရင်း အေးအေးလူလူ စကားစမြည်ပြောနေခဲ့ကြသည်။ ခဏနေလျှင် ကိုယ်တို့ ဘယ်ကို သွားကြမည်လဲ၊ ဘယ်သူ့ကို (သို့) ဘယ်သူတွေကို စောင့်နေခဲ့ကြတာလဲ၊ ဘာစကားတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲ ဘာတစ်ခုမှ မမှတ်မိတော့ပါ။
ကိုယ်မှတ်မိတာ တစ်ခုသာပဲ ရှိသည်။
ထိုသစ်ပင်ကြီး၏ အရိပ်အောက်တွင် လူတစ်ယောက်နှင့်ကိုယ် တစ်နေရာရာကို သွားဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက် (သို့) တစ်စုတစ်ဖွဲ့ကို စောင့်စားရင်း တစ်စုံတစ်ရာ ပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး၏ စိတ်အာရုံတွေထဲမှာ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်။ အတိတ်အကြောင်း ပြောဖြစ်ခဲ့လျှင်သော်မှ ကိုယ်တို့သည် ဖြစ်ပျက်ပြီးသမျှ အကြောင်းအရာတွေဆီမှာ မရှိ၊ အနာဂတ်အကြောင်း ပြောဖြစ်ခဲ့လျှင်သော်မှ ကိုယ်တို့သည် မဖြစ်ပျက်သေးသမျှ အကြောင်းအရာတွေဆီမှာ မရှိ။ လက်ရှိအခိုက်အတန့်၏ အေးချမ်းမှုဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ။
ထိုနေ့က နေအတော်ပူပါသည်။ တိုက်သည့် လေကလည်း ပူသည်။ သို့သော် ထိုအခိုက် အေးချမ်းသာယာ ရှိလှ၏။ သစ်ပင်ပေါ်က ငှက်သံကလေးတွေကို ကြားနေရပြီး၊ သစ်ရွက်ခြောက်ကလေးတွေလည်း ကျဆင်းလာတတ်သည်။
ထိုသစ်ပင်သည် ဘာပင်များလဲ ကိုယ် မသိခဲ့ပါ။
ထိုနေရာသို့ တဖန် ပြန်လည် သွားကြည့်ဖို့ အခါခါ စိတ်ကူးမိသော်လည်း အကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါ။
ခဲယဉ်းပင်ပန်းစွာ သွားရောက်ရမည့် ခရီးလည်းမဟုတ်၊ တားမြစ်ပိတ်ပင်မည့်သူ ရှိလျှင်သော်မှ အသိမပေးဘဲ ခဏတဖြုတ်နှင့် ရောက်နိုင်သော်လည်း ကိုယ် ပြန်မသွားဖြစ်တော့ပါ။ လူ့ဘဝမှာ လုပ်တိုင်း မဖြစ်နိုင်တာတွေအပြင်၊ ဖြစ်တိုင်း မလုပ်နိုင်တာတွေလည်း ရှိလေသည်။
ထိုလမ်းကို မလျှောက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့နောက် ထိုသစ်ပင်၏ အမည်နာမကို သိရုံသက်သက်တော့ဖြင့် အတိတ်ကို ပြန်မပတ်သတ်လိုတော့ပြီ။
ဘယ်အရိပ်အောက်မှာ ကိုယ် ခို​ဝင်ခဲ့ဖူးတာပါလဲ။
Posted by Rita at 6/11/2011 12:39:00 PM2comments Links to this post
Labels: disorder, Essay, me, remembrance
အသည်းပန်းမှာဆူးတွေနဲ့ရယ် - မြနှောင်းညို
အမေ့ခက်လေ သူ့ဝေဒနာ မဟောင်းဘူးတဲ့
သြော်.. နန်းမဟီအသည်းမှာ အသင့်ခူးပါလို့
တတန်းတသီ တကတည်းသာ အဆင့်ဆင့်ဆူးတွေယှက်မှတော့
အကြိုက်ဆုံး ဝတ္ထုတွေထဲက တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ဆရာမ မြနှောင်းညိုရဲ့ "အသည်းပန်းမှာ ဆူးတွေနဲ့" ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုရဲ့ ဇာတ်ဝင်ကဗျာပါ။
ဒီကနေ့ အားနေတုန်း facebook ကြည့်နေရင်း fan pgae မှာ တက်လာတာတွေ့လို့ တင်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ့။ (ကာယကံရှင်ဆရာမကို လှမ်းမပြောဘဲ တင်လိုက်ပါတယ်)
အဲဒီလို ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ ဝတ္ထုတွေ ရီဗျူးရေးဖို့ ကြိုးစားရင် ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်ဘူး။ ဘယ်တော့မှလည်း ပီပြင်မယ် မထင်ဘူး။ အဲဒီဝတ္ထုကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ အရေးပါသော၊ အရေးမပါသော၊ စာကြောင်းကလေးနဲ့သာ ပြသွားသော ဇာတ်ကောင်တကောင်ချင်းစီက စလို့ စကားလုံးတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းယူသွားပုံတွေ၊ ပြန်ဖြေပုံတွေ တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်းကို အသေးစိတ် ကြိုက်ခဲ့မိတယ်။ အဓိကကတော့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေကြောင့်ပါပဲ။
ကိုယ် သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဝတ္ထုမို့ မြနှောင်းညိုအကြောင်း စကားစပ်မိတုန်း ဖတ်ကြည့်ပါလားလို့ တိုက်တွန်းဖူးတယ်။ ခေါင်းစဉ်ပြောလိုက်တာနဲ့ အတင်းကို ဖတ်ဖို့ ငြင်းတော့တာပါပဲ။ (မိုက်လိုက်လေခြင်း)
ဆုရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့ သီတာဆောင် အခန်းဖော်သူငယ်ချင်း နန်းရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ဆွဲယူဆက်စပ်ပြီး ဆုပြောတဲ့ စကားတွေ၊ ခံစားချက်တွေ။
နောက် ဆု အဘွားဖြစ်သူ နာရေးမှာ ကျော်ဆွေကို မိဘတွေနဲ့ ဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စနောက်ပိုင်း ကျော်ဆွေကို ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု ပြဿနာ။
ခင်နှင်းဖြူကို လူဆိုးလုပ်မပစ်ခဲ့ဘဲ သဘာဝကျကျ သူဖြစ်သင့်တဲ့ ဖြစ်ရမယ့် အနေအထားအတိုင်း ရေးထားခဲ့တာ။ (တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာ မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် လုပ်တဲ့လူ၊ ယုတ်ညံ့တဲ့လုပ်ရပ် လုပ်တဲ့လူ ဆိုတာ ကြိမ်ဖန်များစွာ တွေ့နေနိုင်တာပေမယ့် အပေါစားရုပ်ရှင်၊ ဝတ္ထုတွေထဲမှာလို သူတပါး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စထဲ ဝင်ပါပြီး ဗီလိန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အတော်မလွယ်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။)
အဲဒီမှာမှ ဆု ရဲ့ ခင်နှင်းဖြူကို သူတို့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ လူဆိုးဖြစ်စေလိုစိတ်ကိုလည်း ပါးပါးကလေး မြင်မိခဲ့သေးတယ်။ (တကယ်တော့ လူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေဟာ အဲဒီလိုပါပဲ။ စိတ်နှလုံးထဲက အကောင်း အဆိုးဆိုတာ ထင်ရှားလင်းချင်းမြင်နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေသာမကဘဲ ထွေပြားလွန်းတာတွေလည်း များလှတယ်)
စောဒီလုံး၊ မင်းမော်၊ ဖရက်ဒီ၊ အိုင်လင်း၊ ကိုဘိုကြည်၊ ကိုလတ် စသဖြင့်တွေ...
မင်္ဂလာဒုံခေတ် ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) နောက်ခံ ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ရင်း အရိပ်တွေ အယောင်တွေ အရုပ်တွေကို တခုချင်း ပီပီပြင်ပြင် မြင်လာရပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေနဲ့ စာရေးသူရဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေဖန်တီးပုံက ပီပြင်လွန်းလို့ လို့ထင်ပါတယ်။ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရင်း အဲဒီလို မြင်လာရပြီဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် အဲဒီဝတ္ထုဟာ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ (ဖြစ်ရင် သွားပြီ)
ဇာတ်လမ်းထဲက အချစ်ဟာ ရိုးစင်းပေမယ့် ထွေပြားတဲ့ ဘဝတွေ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ လန့်စရာကောင်းလောက်အောင် ယုတ္တိဆန်တဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေကြောင့် တကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ချောင်းကြည့်ခဲ့ရသလိုပဲ။
အဲဒီဝတ္ထုက '82 လောက်က ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းမှာ အခန်းဆက်ပါခဲ့ပြီး နာမည်ကျော်ခဲ့တာပေမယ့် 2001/2 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က လုံးချင်းကျမှပဲ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခဏခဏ မရိုးနိုင်အောင် ဖတ်ဖြစ်တယ်။
ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
ဖြည့်စွက်။ (3:12 PM)
ဆု နေရာက ရေးထားတဲ့ ဇာတ်ဝင်ကဗျာ နှစ်ပုဒ်စလုံးဟာ ကဗျာကြိုက်ခဲတဲ့ ကိုယ့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တယ် မဆိုသာပေမယ့် စာရေးဆရာကို မေ့ပြီး တကယ်ပဲ ဇာတ်လမ်းထဲက ဆုကိုယ်တိုင် ရေးထားသလို ပီပြင်လှတယ်။
ဆိုတဲ့ အပိုဒ်က မမြင့်မားလှတဲ့၊ မပြည့်စုံတဲ့၊ အဘွားတစ်ယောက်သာ အားကိုးရာရှိတဲ့ ဘဝကနေ မြန်မာတပြည်လုံး ပထမနဲ့ ဆေးကျောင်းဝင်ခဲ့ပြီး၊ ခက်ခဲချို့တဲ့သလောက် မာနနဲ့ အာဃာတကြီးမားလွန်းတဲ့ ဆု ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ကောင်းကောင်းပြနိုင်တဲ့ အပိုဒ်ပါပဲ။
Posted by Rita at 6/08/2011 01:08:00 PM6comments Links to this post
Labels: book, remembrance, မြနှောင်းညို
ဂျူး ရဲ့ အမျိုးသားဇာတ်ကောင်တွေ
(အမျိုးသားဇာတ်ကောင်ကိုလည်း တခြား ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာရေးဆရာမ ဂျူးစာအုပ်ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေလောက် မညံ့တာကို မြင်ရတယ်။ လယ်ဗယ်ညှိထားတယ်ပဲ ပြောရမလား )
ယောက်ျားလေးတွေဟာ ဂျူးရဲ့ အမျိုးသားဇာတ်ကောင်တွေကို မိန်းမဇာတ်ကောင်တွေထက် ညံ့တယ်၊ ဂျူးက မိန်းမတွေကို ဦးစားပေး အသားပေးတယ်လို့ ဘာလို့ တညီတညာတည်း မြင်ကြတာလဲ မသိဘူး။
ကိုယ်တော့ အဲလို မမြင်ပါဘူး။ ပြောရရင် ယောက်ျားဇာတ်ကောင်တွေကမှ ဟုတ်တုတ်တုတ်ရယ်။ မိန်းမဇာတ်ကောင်အတော်များများက တော်မလိုနဲ့ ချာတာတာ။
ပျော့ညံ့တဲ့ အမျိုးသားဇာတ်ကောင်တွေလည်း မရှိဘူး မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိပါတယ်။
ဥပမာ - ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကားက (ဖြိုးကျော်)။ ဒါကလည်း အလကားနေရင်း ညံ့တာမှမဟုတ်တာ။ သူ့ဇာတ်နဲ့သူ လိုက်ဖက်စွာ ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပီပြင်စွာ အားနည်းတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်နေတာပဲ မဟုတ်လား။ သူ့ကို ဖျော့တော့ထားမှ နန္ဒက ပိုမြင်သာမှာ မဟုတ်လား။
ကိုယ့်အမြင်တော့ မောင်၊ နန္ဒ၊ ယုမော်၊ နေသန်၊ စသဖြင့် စသဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ထဲတော့ သူတို့ ညံ့လိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် စာရေးဆရာက မမျှမတ ဘက်လိုက်ရေးထားလိုက်တာလို့ မထင်မိပါဘူး။ မြတ်စုတို့ ဖြိုးကျော်တို့လို အားနည်းတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေမှာတောင် ဘက်လိုက်ပြီးရေးထားတယ်လို့ မခံစားရဘူး။ သူ့ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ဇာတ်လမ်းအနေအထားနဲ့ လိုက်ဖက်သင့်တော်နေတာပဲ။
ဒါမှမဟုတ် စာရေးဆရာရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက် သရုပ်ဖော်မှုကြားမှာ ယောက်ျားဇာတ်ကောင်၊ ယောက်ျားစာဖတ်သူ နဲ့ မိန်းမဇာတ်ကောင်၊ မိန်းမစာဖတ်သူတွေဟာ မြွေ မြွေချင်း ခြေမြင်နေကြတာများလား။
SJD >>> ယုမော်နဲ့ သူ့မိန်းမဆို ယုမော်ကိုပိုကြိုက်တယ်။ ပိုကြိုက်တယ်တောင်မဟုတ်ပါဘူးလေ။ ကြိုက်ကိုကြိုက်တာ။သူဘာလိုချင်လဲ၊ သူဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သူသိတယ်။ သက်နှင်းအိမ်ကို အမြင်ကတ်တယ်။ ကိုယ်ကသာ Keptman (ဆိုလား ) ဖြစ်နေရတာပါလို့ သက်နှင်းအိမ်ကို သူပြောတုန်းက သနားလိုက်တာ။ အဲ့ဒီကျတော့မှ သူ့ဖက်ကိုမြင်ပေးတတ်ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီဇာတ်ကွက် မတိုင်ခင်ကလည်း နှင်းကို မကြိုက်ပါဘူး။ နှင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ နာမဝိသေသနတွေဆိုတာကို လည်း ကြိုက်မှကြိုက်။
Me >>> ဟုတ်တယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်၏ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် ကို နားလည်လာတဲ့အခါ အဲဒီမိန်းမထက် အဲဒီမိန်းမမျိုးရဲ့ ယောက်ျားဖြစ်ရတဲ့ အကြပ်အတည်းကို ပိုနားလည်လာသေးတယ်။
ဂျူးရဲ့ ဇာတ်ကောင်မိန်းမတွေ တော်တယ် ထက်မြက်တယ်ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နေရာမှာ တော်နေ ထက်မြက်နေတာလဲ လို့ မေးကြည့်ရင် ဘယ်နားသွားရှာပြရမှန်းကို မသိဘူး။ တကယ်။
ဂျူးတော်တာကိုတော့ ချွင်းချက်မရှိ လက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့ဇာတ်ကောင်မိန်းမတွေကတော့ ဂျူး မဟုတ်ဘူး။
SJD >>> သူတို့က တနေရာမှာ တအားထက်ပီး တနေရာမှာ တအားညံ့နေလို့နဲ့တူတယ်။ ပညာတတ်တွေညံ့ဘီဆို လိုက်လို့ကို မမှီဘူး။ သင်လို့ကိုမရဘူး။ နောက်တခုက အတ္တနဲ့ မာနကြီးကြလို့လားပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုယ် သူတို့မသိကျပြန်ဘူး။ ဂျူး ရဲ့ မိန်းမဇာတ်ကောင်တွေပြောပါတယ်။
Me >>> snake snake see the legs =D
SJD >>> ပညာသည်တွေ ဆိုတော့လေ :D
PM >>> လယ်ဗယ်သုံးတာထက် တခြားဘယ်လိုသုံးရင် ကောင်းမလဲတော့မသိဘူးဗျ
ပြောချင်တာကတော့ ဖတ်ဖူးတဲ့ အရင်ဇာတ်ကောင်တွေနေရာကို ဝင်ခံစားပေးလို့မရဘူး။ ဒီစာအုပ်ကျတော့မှ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ကို ကိုယ်ထင်ဟပ်ကြည့် မြင်ယောင်ကြည့်ပေးလို့ရတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်အတ္တနဲ့ နှိုင်းလိုက်မိတာပါပဲ (ဒါနဲ့ ခုနက ကော်မန့် တစ်ခုရေးသေးတယ် ဘယ်ပျောက်သွားလဲမသိဘူး)
Posted by Rita at 6/01/2011 09:19:00 PM4comments Links to this post
Labels: Juu, This and That, Thought